2 Ndị Kọrịnt 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Ndị Kọrịnt 13:1-14
13 Nke a bụ nke ugboro atọ+ m na-abịakwute unu. “A ga-amara na okwu ọ bụla bụ eziokwu n’ọnụ ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ.”+
2 Ekwuwo m na mbụ, dịkwa ka à ga-asị na m nọ ya na nke ugboro abụọ, ọ bụ ezie na anọghị m ya ugbu a, tupu mụ abịa, ana m agwa ndị mere mmehie na mbụ na ndị ọzọ niile, na ọ bụrụ na mụ emechaa bịa ọzọ, agaghị m eme ebere,+
3 ebe unu na-achọ ihe àmà na Kraịst na-ekwu okwu n’ime m.+ Kraịst abụghị onye na-adịghị ike n’ebe unu nọ, kama ọ bụ onye dị ike n’etiti unu.
4 N’eziokwu, a kpọgidere ya n’osisi+ n’ihi adịghị ike,+ ma ọ dị ndụ n’ihi ike Chineke.+ N’eziokwu, anyị na ya adịghịkwa ike, ma anyị na ya ga-adịkọ ndụ+ n’ihi ike Chineke+ n’ebe unu nọ.
5 Na-anwalenụ ma ùnu nọ n’okwukwe ahụ, na-anwapụtanụ ihe unu onwe unu bụ.+ Ka ọ̀ bụ na unu aghọtaghị na unu na Jizọs Kraịst dị n’otu?+ Ọ gwụla ma à jụrụ unu ajụ.
6 Ana m enwe olileanya n’ezie na unu ga-emesị mara na ajụghị anyị ajụ.
7 Ma anyị na-ekpeku Chineke ekpere+ ka unu ghara ime ihe ọjọọ ọ bụla, ọ bụghị ka anyị onwe anyị wee yie ndị a na-ajụghị ajụ, kama ka unu wee na-eme ezi ihe, ọ bụ ezie na anyị onwe anyị pụrụ iyi ndị a jụrụ ajụ.
8 N’ihi na anyị apụghị ime ihe ọ bụla megide eziokwu, kama anyị pụrụ naanị ime ihe ga-akwado eziokwu.+
9 Anyị na-aṅụrị ọṅụ mgbe ọ bụla anyị na-adịghị ike ma unu adị ike;+ anyị na-ekpekwa ekpere maka nke a,+ ka unu bụrụ ndị a gbaziri agbazi.
10 Ọ bụ ya mere m ji ede ihe ndị a mgbe m na-anọghị ya, ka ọ ga-abụ, mgbe m ga-anọ ya, ka m ghara ime omume n’aka ike+ dị ka ikike ahụ nke Onyenwe anyị nyere m si dị, iwuli elu,+ ọ bụghịkwa itida etida.
11 N’ikpeazụ, ụmụnna m, na-aṅụrịnụ ọṅụ, nọgidenụ bụrụ ndị a na-agbazi, ndị a na-akasi obi,+ ndị nwere otu uche,+ na-ebinụ n’udo;+ Chineke nke ịhụnanya na nke udo+ ga-anọnyekwara unu.
12 Jirinụ nsusu ọnụ dị nsọ na-ekele ibe unu.+
13 Ndị nsọ niile na-ekele unu.
14 Ka obiọma Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke na-erughịrị mmadụ na ịhụnanya nke Chineke na mmụọ nsọ anyị niile nwekọrọ dịnyere unu niile.+
2 Ndị Kọrịnt 13
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D47%26Chapter%3D13%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl